Vula izixhobo zeCAD, izixhobo zokuhlela ze-gvSIG -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Vula izixhobo ze-CAD, izixhobo zokuhlela ze-gvSIG
Uthotho lwezinto ezinomdla ezinomdla sele ziqalisiwe, ezivela kwigalelo leCartoLab kunye neDyunivesithi yaseLa Coruña. I-gvSIG EIEL ibandakanya izandiso ezahlukeneyo, iluncedo kakhulu, zombini kulawulo lomsebenzisi kwi-gvSIG interface, iifom zesiko kunye nokuqinisekiswa okuzenzekelayo.
Kodwa yintoni ebambe ingqalelo yam iilwimi ezivulekileyo ze-CAD, ekhompyutheni yayo ye-0.2 ibonakala ithatha izicelo ezininzi ezivela kuluntu ukugxininisa nokuphucula imizila yokwakha nolwazi.
Ukuba i-gvSIG inento esiyithandayo njengabasebenzisi be-GIS sisixhobo sayo sokudala kwisitayile esihlala siyenza kunye neenkqubo ze-CAD, inento yonke esibuza ngayo malunga neenkqubo ezikhethekileyo ze-GIS. Ukufaka olu lwandiso kuthatha indawo ye-extCAD emiselweyo. Incwadana yomsebenzisi ichaza indlela yokufaka kuphela ulwandiso, njengoko luza lusebenza, nangona uguqulelo oludala lwe-gvSIG.
Le miyalelo ilandelayo ili-11 iqokelelwe kukhetho lokufaka: Ipoyinti, iMultipoint, iArc, iPolyline, iMultipolyline ,, iMultitask, i-Multipolygon, iPoligoni rhoqo, iRectangle, isangqa, iEllipse kunye neAutopolygon.
Ngoxa ukhetho Wuguqule 16 elandelayo imiyalelo: Ukukopa, Mirror, Jikelezisa, Scale, ingadubula, shift, Hlela enekona Yongeza enekona, Susa enekona, Ngena, Redigitize umgca Sika umgca Sika yepholigoni, Redigitize yepholigoni, yepholigoni yangaphakathi Nweba .
Iyonke i-27, endiyikhumbulayo ngaphambili baye babala i-21 xa wenza ukuthelekiswa kwemilayezo ye-AutoCAD malunga ne-gvSIG 1.9.
Yintoni eyona nto ibaluleke kakhulu ngeeOfthiwe zeCAD ezivulekileyo ze-0.2
Ukuqala, ndifumana umsebenzi owenziwa ngu iqhosha le mouseWakuba uqalisiwe umyalelo, ungasebenza njengo "rhoxisa". Kubonakala kuluncedo kakhulu kum, kuba xa uzobe ijiyometri, umzekelo i-polyline okanye ipholigoni, kuqhelekile ukwenza impazamo xa ubeka inqaku; endaweni yokucima umsebenzi owenziweyo, okanye ukuqhubeka nokuhlela kamva ...
iqhosha lokunene, kwaye iphuzu lokugqibela elibekiwe lichithwe
Kwakhona, kukho ezinye izitshixo ezinceda ngomsebenzi, ngathi "isithuba" sitshixo, ekuvumela ukuba ukhangele into elandelayo. Kwenzeka, umzekelo, xa sihlela ijiyometri entsonkothileyo, njengoko kunjalo kwipoligoni enemingxunya, okanye iipolylines ezininzi.
ukhiye wethebhu, kwaye usithatha kwijometri elandelayo
Emva koko kukho ibha yendawo ukugqiba umsebenzi kunye ileta C ukurhoxisa. Ngelixa kukho abo babuza ngokungathandabuzekiyo ukusetyenziswa kwebhodibhodi ngeli nqanaba, njengeendlela ezimfutshane embindini womyalelo zisasebenza.
Iindlela zokuphinda usebenze kwakhona umgca kunye nepoligoni ukusombulula lo mda mkhulu xa usenza ulondolozo kwiigeometri esele zenziwe. Nangona okuninzi oku kuza ne-gvSIG, ulwandiso abalwenzileyo kwiindlela zilungile kakhulu, umzekelo, xa umgca okanye ipoligoni isikiwe, umyalezo ubuza ukuba ngaba sifuna ukugcina icandelo elingaphezulu.
Ukutshintsha izixhobo ezingagqibekanga ngezixhobo ezivulekileyo ze-CAD lukhetho olusebenzayo. Isixhobo kuphela esingafumanekiyo ngumyalelo womgca, njengoko senziwe ngomyalelo wePolyline, ukuqonda ukuba inecandelo elinye kuphela.
Olunye uphuculo kukucwangciswa kweepropathi ze-snaps, ukuze zingachaphazeli isantya somatshini. Kule nto unokuguqula inani lejiyometri yohlalutyo, umaleko kwaye ukuba ukulandelela kwenziwa kuphela kwii-vertices okanye emaphethelweni.
Emva koko ukhetho lokuvula i-NavTable ngokuzenzekelayo xa ugqiba ijiyometri. Ngale nto, idatha yealphanumeric inokugqitywa kumgca omnye wenkqubo yokuvelisa. Nangona eyona nto iphambili koku, kukuba ukugqitywa kwejiyometri ngoku kungumsitho, ke aba dwelisi benkqubo banokwenza eminye imisebenzi enxulumene noko:
Njengokuhlaziywa kweengxolo kwiindawo zendawo,
Ukuphakamisa umthengisi obhengeza utshintsho kwiziko leenkcukacha nangona iindawo zentengiso zingekho kwisithuba sendawo,
Okanye ukwazisa nje isiseko sedatha ukuba ijiyometri ethile sele ikho kwaye uqhubeke nokunika ingxelo ngentembeko ngokubhekisele kwidatha yeetafile. Njengokuba kunokuba kunjalo xa ifayile yenziwe yedijithali kodwa imephu icotha.
Ayizukwakha into engaqhelekanga ukubona olu lwandiso kuhlobo olulandelayo lwe-gvSIG, njengoko sibonile nge NavTable. Kubonakala kuthi ungumzekelo olungileyo, ukuba kunye Fonsagua Bamele iziphumo zomsebenzi iSiseko esiye sakhula kwi-conformation yaloo mveliso yoshishino, enye yeentsika ezinamandla zokugcinwa kweePlani eziMthombo oVulwayo.
Ukulandela emva kwesi sihloko ndibonisa ezi zilandelayo:
Emva koko le vidiyo ibone ukusetyenziswa kwe-EIEL kwindlela yokwenza indlela.
I-Google Docs ngoku ingafunda iifayile ze-dxf